ေစ်းကြက္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္မႈေၾကာင့္ အြန္လိုင္းမွ က်ဴရွင္ဆရာႀကီး ခ်န္ဘြန္ႏွင့္ Fuji Fuji တို႔ လမ္းမွားလမ္းမွားတြင္ စားသံုးသူမ်ား – Pandaily
The online education sector boomed after the COVID-19 epidemic (Source: CFP)
ေစ်းကြက္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္မႈေၾကာင့္ အြန္လိုင္းမွ က်ဴရွင္ဆရာႀကီး ခ်န္ဘြန္ႏွင့္ Fuji Fuji တို႔ လမ္းမွားလမ္းမွားတြင္ စားသံုးသူမ်ား
May 11, 2021, 14:48ညနေ 2021/05/11 20:04:47 Lucia Si
တနင်္လာနေ့မှာ ဘေဂျင်းမြို့က ဈေးများကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့က မလျော်မကန်ယှဉ်ပြိုင်မှုနဲ့ လမ်းလွဲနေတဲ့ စားသုံးသူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖူကူရှီးမားကို အွန်လိုင်းပညာရေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။
စစ်တမ်းတွေအရ Alibaba ရဲ့ လက်ဝဲဘက်နဲ့ Tencent ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ယွမ်ငွေပမာဏကို တိုးမြှင့်ဖို့အတွက် အော်ဒါတွေ၊ သင်္ခါတွေ၊ အတုအပတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ လွဲမှားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ Zuoyebang ဟာ သူ့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ လိမ်လည်တိုင်ချက်တင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဖော် ပြချက်အရ သိရပါတယ်။
ကုမဏီနှစ်ခုမှာလည်း လွဲမှားတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို အသုံးပြုနေတာ တွေ့ရပါ တယ်။ Kwang app ဟာ ပရိုမိုးရှင်းပွဲတစ်ခုအပြင် သူ့ရဲ့ကြောင်တွေကို ဘေဂျင်းအရှေ့ပိုင်းက တရားဝင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရက်အကန့်အသတ်နဲ့ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာ ၂၁ ခုလောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Fu-Double မှာလည်း ရှောင်တခင် ဖောက်သည်တွေကို လျှော့ဈေးအနေနဲ့ ယွမ် ၉ဝ (၁.၄၈ ဒေါ်လာ) တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပက်ကေ့ချ်ကို ယွမ် ၃၉၉ (၆၂ ဒေါ်လာ) ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ္တမ္းေတြအရ ဒီေစ်းေတြဟာ စံခ်ိန္တင္ ေရာင္း၀ယ္မႈ မျပဳဘဲ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။
ျပစ္ဒဏ္ရင္ဆိုင္ေနရသူ ၂.၅ သန္း (၃၈.၉ သန္း) ဟာ က်ဴရွင္ဆရာေတြေရာ၊ ဧရာမပုဂၢိဳလ္ေတြေရာ သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကို ကိုယ္တိုင္သံုးသပ္ၿပီး မေလ်ာ္ကန္တဲ့ မားကက္တင္းစာတန္းေတြအားလံုးကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
Topics: မြင်ကွင်းတ႐ုတ္နည္းပညာ Ed Of West Wang Yong Don ၏ “ MIT Review” Top Ten 2021 စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္
“ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ရိုးသားစြာနဲ႔ ဒီျပစ္ဒဏ္ကို အျပည့္အဝ လက္ခံၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေဆာင္ရြက္ေနရၿပီး ပရိုမိုးရွင္းနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းေတြကို ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာင္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ေရးၿမိဳ႕မွ မြန္ျပည္နယ္သို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ ရည္မွန္းခ်က္ကို လိုက္နာၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေအာင္ သင္ယူဖို႔၊ ယြမ္ေငြၾကြယ္ဝတဲ့ လူမႈတာဝန္ေတြကို လက္ေတြ႔က်က် ေက်ပြန္ေစမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထိန္းညႇိေပးဖို႔နဲ႔ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးစြမ္းဖို႔” ဆိုၿပီး ယြန္က်ိက ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။
တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာ ကျောင်းပြင်ပလေ့ကျင့်ရေးပလက်ဖောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ချက်တွေအောက်မှာ အများကြီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက ဘေဂျင်းရဲ့ဒေသန္တရစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ GSX နဲ့ Koolearn အပါအဝင် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းလေးခုဟာ ဒဏ်ငွေ ယွမ် ၅၀ဝဝ (၇.၇ သန်းခန့်) ဒဏ်ငွေရိုက်ခံခဲ့ကြရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ မှားယွင်းတဲ့ ကြော်ငြာတွေနဲ့ ဈေးနှုန်းလွဲမှားတဲ့ ဖောက်သည်တွေကို အသုံးချခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ရိုက်တာ.
မွန်ပြည်နယ် ဈေးများကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့က ကျောင်းချိန်ပြင်ပတွင် ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများအား ဖြိုခွဲအရေးယူခြင်းသည် ဈေးလည်ပတ်မှုကို ထိန်းညှိရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
Tags chinese K12 online education | market regulation | Online Education | tutoring | Yuanfudao | zuoyebang
Market Regulators Fine Online Tutoring Giants Zuoyebang and Yuanfudao for Misleading Consumers
The Beijing Municipal Bureau of Market Supervision and Administration on Monday imposed the maximum possible penalty on online education platforms Zuoyebang and Yuanfudao for unfair competition and misleading consumers.
Industry May 11 မေ 12, 2021
बाजार नियामकों ने उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए ऑनलाइन कोचिंग दिग्गज ज़ूओ येबांग और युआन फुक रोड पर जुर्माना लगाया
सोमवार को, बीजिंग म्यूनिसिपल मार्केट सुपरवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अनुचित प्रतिस्पर्धा और भ्रामक उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्मों लेफ्ट लीफ गैंग और युआन फुकुशिमा पर उच्चतम जुर्माना लगाया।
Industry May 11 မေ 11, 2021
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਰ ਜ਼ੂਓ ਯੇਬਾਂਗ ਅਤੇ ਯੂਆਨ ਫੂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਜਿੰਗ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਯੁਆਨਫੂ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ.
বাজার নিয়ন্ত্রকদের অনলাইন কাউন্সেলিং জায়ান্ট জুওবা এবং ইউয়ানফু রোড দ্বারা ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করা জরিমানা
সোমবার, বেইজিং মার্কেট সুপারভিশন ব্যুরো অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্মের বাম পায়ের গ্যাং এবং ইউয়ানফু আইল্যান্ডে যথাযথ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এবং ভোক্তাদের বিভ্রান্তিকর ভিত্তিতে সর্বোচ্চ শাস্তি আরোপ করে।